အင်ဒီပန်းဒန့် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆိုက်သေး (Tabloid) မူ (၂၀၀၃–၂၀၁၆)
၇ အောက်တိုဘာ ၁၉၈၆; ၃၅ နှစ် အကြာက (၁၉၈၆-၁၀-07)
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ လန်ဒန်၊ ကန်စင်တန်၊ နော့သ်ကလစ်ဖ် ဟောက်စ်
The Independent on Sunday (၁၉၉၀–၂၀၁၆)
အွန်လိုင်း indy100 (၂၀၁၃–လက်ရှိ)
အင်ဒီပန်းဒန့် (အင်္ဂလိပ်: the Independent) သည် ဗြိတိသျှ အွန်လိုင်းသတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်သည်။ မနက်ပိုင်း ပုံနှိပ်သတင်းစာအဖြစ် ၁၉၆၈ တွင် တည်ထောင်ခဲ့၍ အမည်ပြောင်အားဖြင့် the Indy ဟု ခေါ်ဆိုကြကာ မူလအစ၌ ဆိုက်ကြီးသတင်းစာဖြစ်သော်လည်း၂၀၀၃ တွင် ဆိုက်သေး (tabloid) အဖြစ်ပြောင်းလဲဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနေ့စွဲသည် ၂၀၁၆ မတ် ၂၆ ဖြစ်၍ အွန်လိုင်းအသွင်ဖြင့် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
သတင်းစာသည် ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများအပေါ် လွတ်လပ်၍ ထိန်းချုပ်မှုမဲ့ ဈေးကွက် (pro-market) တွင် ရပ်တည်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သတင်းစာကို တိုနီ အို'ရေးလီ၏ အိုင်းရစ် "Independent News & Media" က ၁၉၉၇ အထိ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ တွင် ရုရှားသူဌေး အလက်ဇန္ဒား လဲ့ဘဲ့ဒဲ့ဗ် (Lebedev) ထံသို့ရောင်းချခဲ့၍ ၂၀၁၇ တွင် ဆော်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးက ရှယ်ရာ ၃၀ % ဝယ်ယူခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ဇွန်၌ သတင်းစာစောင်ရေသည် ၅၈,၀၀၀ အောက်သာရှိခဲ့ရာ ၁၉၉၀ က အမြင့်ဆုံးရောင်းချရနှုန်းထက် ၈၅ % ကျဆင်းခဲ့သည်။ တစ်ဖက်တွင် တနင်္ဂနွေထုတ်ဝေမူသည်လည်း စောင်ရေ ၉၇,၀၀၀ ကျော်အထက်သာ ရှိခဲ့၏ ။ နေ့စဉ်ထုတ်ဝေမူသည် ၂၀၀၄ တွင် ဗြိတိသျှ စာနယ်ဇင်းဆု (Press Award) ၏ တစ်နှစ်တာ အမျိုးသား သတင်းစာဆုအဖြစ် ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဤသတင်းစာ၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် မိုဘိုင်းအပ်(ပ်) နှစ်ခုပေါင်း၌ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု/ဖတ်ရှုသူ လစဉ် ၂၂ သန်းကျော်ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Ruddick၊ Graham (4 August 2017)။ Saudi ties raise doubts about Independent's editorial freedom။ The Guardian။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ Rajan၊ Amol။ "Is the Independent still independent?"၊ BBC News၊ 29 July 2017။
↑ Our Story။
↑ "'The Independent' launches tabloid version to give readersachoice"၊ The Independent၊ 27 September 2003။
↑ ၅.၀ ၅.၁ "Independent to cease as print edition"၊ BBC News၊ 12 February 2016။
↑ Wilby၊ Peter။ "It is. Is he?"၊ The Guardian၊ 14 April 2008။
↑ "Independent titles sold to Lebedev family company"၊ The Independent၊ 25 March 2010။
↑ "Sale of stake in Independent to Saudi investor has 'no influence' on editorial coverage, watchdog rules"၊ The Independent၊ 16 September 2019။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်ဒီပန်းဒန့်&oldid=673052" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၄:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။